The Ab Presents Nepal » उत्कृष्ट नायिका बनिन् स्वस्तीमा, भन्छिन्- बिहेपछि अवार्ड पाइदैन भन्नेलाई सन्देश हो !
उत्कृष्ट नायिका बनिन् स्वस्तीमा, भन्छिन्- बिहेपछि अवार्ड पाइदैन भन्नेलाई सन्देश हो !
शुक्रबार बेलुकी राष्ट्रपति भवन शित्तल निवासमा आयोजना भएको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’मा नायिका बेनिशा हमालले चलचित्र ‘ब्लाइन्ड रक्स’बाट वि.सं २०७४ सालको उत्कृष्ट नायिकाको पुरस्कार जित्दै गर्दा चलचित्र ‘बुलबुल’बाट नायिका स्वस्तिमा खड्काले वि.सं २०७५ सालको उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड जितिन् । एकैसाथ ३ बर्षको अवार्ड वितरण गरिएको थियो ।
स्वस्तिमासँग गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश
मैले अवार्ड नै पाउँछु भनेर काम गरेकी त होइनँ । काम गर्दा अवार्डतिर ध्यान जाँदैन । अवार्ड आयोजनाको समय आउँदा भने, हाम्रो चलचित्रले अवार्ड पाउला कि नपाउला भन्ने लाग्छ ।
अब धेरै जिम्मेवारी बढेको छ जस्तो लाग्छ । अब, ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । आफूले पहिले गरेको भन्दा अझै बढी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । पहिले सत प्रतिशत दिएको थिएँ भने अब २ सय प्रतिशत दिनुपर्छ ।मेरो चयनमा जहिले पनि दुबै खालको चलचित्र हुन्छ । अवार्ड पाउने खालकै चलचित्र मात्रै गर्छु भन्ने पनि छैन । कमर्सियल र आर्ट मुभी दुबै गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय अवार्ड पाएको नायिका भन्दा अर्कै हुन्छ । ‘सार्क फिल्म फेस्टिभल’मा अवार्ड पाएकी नायिका भन्दा पनि अर्कै हुन्छ । यसमा कुनै पनि खालको तुलना हुँदैन । दुबैमा फरक महशुश हुने रहेछ ।
र मैले सिँउदोमा सिन्दुर लगाउनुको कुरा गर्दा, सिउँदो लगाउनु बिबाहित महिलाको पहिचान हो । बिहे गर्ने बेलामा नै एकजना नायकले मलाई फोन गरेर तिमीले कहाँ बिहे गर्न लागेको, एक दुइवटा अवार्ड पाएपछि मात्र बिहे गर, नत्र अवार्ड नै पाइदैन भन्नुभएको थियो’ ।
तर, अहिले देशले नै दिएको अवार्ड पाएपछि बिहे गरेर, सन्तान जन्माएपछि पनि अवार्ड पाइन्छ भन्ने यसले सन्देश दिन्छ । सार्क फिल्म फेस्टिभलमा अवार्ड पाउने ५२ बर्षको नायिका हुनुहुन्थ्यो । यसैले, काम र अवार्डलाई बिहेले छेक्दैन भन्ने वुझेको छु’ ।
प्रकाशित मिति July 14, 2019